सिस्टर सँगको त्यो दिन | Kamsastra
Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, सिस्टर सँगको त्यो दिन,
मेरो अर्को पनि एउटा यस्तै मिल्दो जुल्दो कथा छ । जत्ती बेला म १७ बर्षको मात्रा थिए । त्यत्ती बेला म होस्टेल् मा बस्दथे होस्टेल् मा घटेको सानो घटना तपाईंहरु सामु पोख्न गैइरहेको छु आशा छ पडिदिनु हुन्छ । हाम्रो होस्टेल् मा केटा केटी गरेर जम्मा ३५ जना थियौ । हाम्रो होस्टेल् मा खाना बनाउने एकजना सिस्टर जस्लाई हामीले सिस्टर भनेर बोलाउने गर्थ्यौ दारजलिङ्गको हुनु हुन्थ्यो । हाम्रो प्रिन्सिपल पनि दारजलिङ्गको नै हुनु हुन्थ्यो वहाँले नै ल्याउनु भएको थियो त्यो सिस्टर लाई । निकै नै कामुक हुनुहुन्थ्यो त्यो सिस्टर हाम्रो प्रिन्सिपल को पनि त्यो सिस्टर सँग लसपस छ भनेर हामी सबैलाई थाहा थियो र प्रिन्सिपल को बुडिलाई पनि । एकदिन म Class देखी टाउको दुखेको हुनाले कोठामा फर्किने अनुमती प्रिन्सिपल सँग लिएर आए र बाटोमा आउदा आउदा सिग्रेट पनि किनेर ल्याएको थिए । मलाई त्यो दिन किन किन एकदम सिग्रेट पिउन मन भएकोले किनेको थिए । कोठामा पुग्दा सिस्टर शायद बाथ रूम मा हुनु हुन्थ्यो त्यसैले मैले कोठामा नै सिग्रेट सल्काएर पिउन थाले । झ्याल खोलेर जोरले पंखा पनि चलाएको थिए धुवा बाहिर जन सजिलो होस भनी । मेरो पछाडि आकस्मत चिसो पानीको थोपा झर्न पुग्यो मैले छिट्टो छिट्टो पछाडि फर्केर हेर्दा सिस्टर मलाईनै हेर्दै मुस्कुराउदै हुनुहुन्थ्यो । मैले झटपट चुरोट भुईमा फाले म डराएको थिए तर सिस्टर को अनुहारमा कुनै त्यस्तो म प्रती गुनासो पाईन त्यसैले पनि अलिक ढुक्क भए म । अनी सिस्टर ले म आउनुको कारण सोधिन, मैले बिमार भएकोले बिदा लिएर आएको सुनाए अनी सिस्टर ले आफ्नु बेडरूम मा आउनु भनेर गईन । म पनि लुरु लुरु सिस्टर को सुत्ने कोठामा गए सिस्टर त आफ्नु ब्रा लगाउदै रहेछिन
मलाई कस्तो कस्तो लाज लाग्यो तर पनि मैले may I come in सिस्टर भने come In सिस्टर ले बिष्टरो भन्नु भयो । म भित्र गए सिस्टर ले मलाई समाएर आफ्नु बेड मा बस्न भनिन म ठुस्स बसिदिए । वहाँको हात अनी ओठ एकदमै कामी रहेको थियो । कस्तो अचम्म सिस्टर मेरो अगाडि ब्रा & पेन्टी मा मात्रा उभिनु भाको थियो । म पनि जवान थिए भर्खर म मा पनि त जोश अनी जागर जुरमुराएको थियो यस्तो लाग्दथ्यो कुनै केटी पाए त कर्‍यामकुरुम चपाउ जस्तो हुन्थ्यो भने सिस्टर त मेरो अगाडि लगभग नाङै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । तरपनी मैले सिस्टर लाई छुन सम्म सकेको थिएन किनकी डर थियो मलाई । सिस्टर अहिले आफ्नु ब्रा खोलेर ठुलो ठुलो बुबु लिएर बेड मा पल्टिनु भयो अनी मलाई बुबु मसाज गर्न भनी मज्जले आँखा चिम्मा गरेर सुत्नु भयो मैले वहाँले भने जस्तै मज्जाले बुबु माड्दै बसे । वहाँले बुबु चुस्न पनि संकेत गर्नु भयो मैले पनि ठुलो ठुलो सिस्टर को बुबु चुसी दिए । मलाई अब खपी नसक्नु भएको थियो मैले आफ्नु लाडो निकै बडेको अनुभब गरे त्यसैले मैले छिटो छिटो आफ्नु लाडोलाई बाहिर निकालेर सिस्टर को पुतिमा छिराउन थाले मलाई याद थिएन वहाँले कट्टु फुकाल्नु भाको छैन भनेर । मैले कट्टु फुकाली दिए …तर वहाँले मेरो लाडोलाई भित्र छीराउन अनुमती दिनु भएन । वहाँले आफ्नु त्यो कालो पुती चाट्नु भन्दै हुनु हुन्थ्यो मलाई अलिक कस्तो घिन लागेर आयो…तर फेरी प्रिन्सिपल लाई मैले चुरोट होस्टेल् भित्र खाएको कुरा सुनाईदिनु हुन्छ कि भन्ने डरले घिन मानि मानि चाटे । त्यत्तिले मात्रा वहाँलाई पुनेछ क्यार मेरो टाउको समाएर जबरजस्ती आफ्नु पुतिमा मेरो मुख ठोस्न थालिन । निक्कै पानी आएको थियो सिस्टर को पुती बाट जुन पानी अलिकती मैले पनि झुक्किएर खानु पुगे छ्या…!! कस्तो नुनिलो अनी कस्तो फुस्स नमिठो गनाएको अहिले सोच्दा घिन भन्दा बडी मेरो लाडो जुरमुराएर आउछ । सिस्टर आँखा चिम्म गरेर निकै मदमस्त हुनु भएको थियो । यहाँ मलाई भने कती खेर आफ्नु लाडो सिस्टर को पुतिमा छिराउ भईरहेको थियो । मैले सिस्टर लाई मेरो छटपटिको बारेमा पनि भने तर वहाँले सुने पनि नसुने जस्तै गर्नु भयो । मलाई अत्ती भयो र सिस्टर को पुती मा आफ्नु लाडो छिराए एकछिन त सिस्टर मज्जाले कराउन थालनुभयो तर एकैछिनमा मलाई आफु देखी अलग गरेर लमपसार परेर बेहोश भए जस्तै गरी सुत्नु भयो । मलाई भने यहाँ निक्कै खपी नसक्नु भएको थियो मैले फेरी कोशीस गरे आफ्नु लाडो पासाउन तर वहाँले फेरी पनि मलाई आफु देखी धकेल्नु भयो । केही सिप नलागेर मैले वहाँको त्यो कालो पुती हेर्दै लाडो खेलाउन थाले २\_४ चोटि के लाडो खेलाएको थिए सारा आन्द्रा भुँडीनै बाहिर निस्केला जस्तै गरी मेरो फुसिको धार पिच्कारीले पानी छ्यापे जस्तै गरी बाहिर निस्किन थाल्यो अहिले भने मैले पनि सन्तोषको श्वास फेरे । म लुरु लुरु निस्केर आफ्नु कोठामा आए तर मनमा अर्कै कुरा खेल्दै थियो फेरी पनि सिस्टर को त्यो पुक्क परेको पुती हेर्नु मन लाग्यो । आफ्नु बाकासबाट Camera निकालेर फेरी सिस्टर को कोठामा पुगे । सिस्टर ले आफ्नु कट्टु लगाईसक्नु भएको रहेछ मेरो सिस्टर को पुती हेर्ने धोको अधुरो भयो तर पनि मैले त्यही अवस्थामा वहाँको फोटो लिन सफल बने यसैमा चित्त बुझाउदै म फर्के आफ्नु कोठामा । सिस्टर छिट्टै स्खलित हुने आईमाई रहेछ त्यो आज आएर मैले राम्रो सङ्ग बुझेको छु । स्खलित भएपछी वहाँ मस्त बेहोसिमा पल्टिने बानिको पनि हुनुहुदो रहेछ जसले गर्दा मैले वहाँको यो फोटो खिच्न सफल बने । अझै पनि म वहाँको यो फोटो हेरेर त्यो दिन सम्झदै कहिलेकाही आफ्नु लाडोलाई खेलाउछु अनी आनन्द मान्छु………………..!!
Labels: Sex, अनुभव, नेपाली यौन कथा, सिस्टर सँगको त्यो दिन